खाद्य सङ्कटको प्रसङ्गबारे - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । गत वर्ष नेपालमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले धान उत्पादन घटेको भनिएको छ । कृषि जी. डी. पी. मा धानको योगदान लगभग २१ प्रतिशत र देशको समग्र जी डी पीमा धानको योगदान ७ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । नेपालका केही जिल्लामा सीमित मात्रामा चैते धान पनि रोपिन्छ । तर यसको उत्पादन कति हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । चैत जस्तो सुख्खा महिनामा पनि रोपाई हुन सक्ने र रोपाईपछि पनि सिँचाइको पर्याप्त सुविधा भएको ठाउँमा मात्र चैते धान हुने भएकोले र नेपालमा त्यस्तो जमिन सीमित ठाउँमा मात्र उपलब्ध भएकोले चैते धानको उत्पादन उल्लेख गर्न लायक परिमाणमा हुँदैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको लकडाउनले चैते धानको रोपाँईलाई केही असर गरेको भएता पनि उत्पादनको दृष्टिले त्यो त्यति उल्लेखनीय हुँदैन ।
हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली बर्से धान बाली नै हो र बर्से धान असार, साउन महिनामा रोपिन्छ । त्यसैले यो भाइरस र लकडाउनले बर्से धान रोपाइलाई असर गरिसकेको छैन । अहिलेको स्थिति त्यति खेरसम्म जारी रह्यो भने मात्र बर्से धानलाई यसले असर गर्दछ अन्यथा गर्दैन । र, यो स्थिति त्यति खेरसम्म कायम रहने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले प्रतिकूल मौसमको कारणले धान उत्पादनमा ठुलै ह्रास आयो भने मात्र नेपालमा खाद्यान्नको अभाव होला । त्यसमा पनि आयातित चामलले नेपालको खाद्यान्नको माग थेगिरहेकोले नेपालमा धान उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटे पनि भारतमा धान उत्पादन घटेन भने नेपालमा खाद्यान्न सङ्कट पर्दैन । किनभने गत वर्ष नेपालले ३२ अर्व २२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको चामल आयात गरेको थियो भने यो वर्षको पहिलो सात महिनामा १८ अर्व ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको छ । त्यसैले नेपालमा खाद्यान्न सङ्कट हुन कि त भारतमा धान उत्पादन निकै नै घट्नु पर्दछ । कि त विगतमा जस्तै नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लाग्नु पर्दछ, जसको सम्भावना देखिँदैन । तर नेपालमा धान उत्पादन धेरै नै घट्यो भने मूल्य बढ्न सक्दछ तर सङ्कटै पर्ने गरी अभाव भने हुँदैन ।
नेपालको दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बाली मकै हो र यतिखेर पहाडमा मकै छर्ने समय हो । गत वर्ष नेपालमा २६ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो । लकडाउनको कारणले यो वर्ष मकै छर्ने बेलामा धेरै मानिस सहर छोडेर गाउँ गएका छन् । लकडाउन नभएको भए जाँदैनथे । र, गाउँघरमा लकडाउन होओस् कि कर्फ्यु नै किन नलागोस् कसैले पनि खेती लगाउने बेलामा काम छोड्दैनन् । त्यसैले यो वर्ष विगतमा भन्दा बढी जमिनमा मकै खेती हुने सम्भावना छ र वर्षा राम्रो भयो भने मकैको उत्पादन पनि बढी नै हुनेछ । नेपालको तेस्रो महत्त्वपूर्ण बाली गहुँ हो र यो वर्षको गहुँ बाली भित्र्याई सकिएकोले यो लकडाउनले गहुँ बालीलाई असर पार्दैन ।
यसरी खाद्यान्न उत्पादनको दृष्टिले यो वर्ष र आगामी वर्ष खाद्यान्नको अभाव भएर भोकमरी नै पर्ने सम्भावना देखिँदैन । मुख्य कुरा नेपाल र भारतमा मनसुन राम्रो हुनु पर्दछ । सुदूर विगतदेखिको अनुभवले यही भन्छ । अन्य बाली र पशुजन्य उत्पादनमा भने चर्को समस्या छ । नगदै बाली अन्तर्गत उखु, आलु तेलहन, जुट र मह जस्ता नगदे बालीमा पनि समस्या छैन । यो वर्षको आलु लगभग भित्र्याई सकिएको छ र खाद्य तेलको झन्डै सबै माग आयातबाटै पूर्ति हुने गरेको छ । अन्य बाली अन्तर्गत पनि दलहनमा खास समस्या नहोला तर अधिकांश नाशवान् ताजा तरकारी र केही फलफूलमा चर्को समस्या छ । एक छिमलको मात्र फलफूल वा ताजा तरकारी खेर गयो भने सानो पुँजीका किसानहरूलाई निकै मर्का पर्दछ र उनीहरूलाई त्यस्तो मर्का अहिले नै परिसकेको छ । पातको साङ्लो जस्तो उनीहरूको कारोबारमा पूर्ति हुन नसक्ने गरी घाटा लाग्यो भने उनीहरू सडकमा पुग्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले उनीहरूलाई राज्यले जसरी पनि जोगाउनु पर्दछ । त्यस्तै मात्राको मर्का पशुजन्य उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई पनि परिरहेको छ । माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादक किसानहरूलाई पनि यो छिमलको उत्पादन नै बजारको पहुँच टुटेर ठुलो घाटा परिसकेको छ । अर्को छिमलको पनि यस्तै हालत भयो भने यस्ता धेरै किसानको धितो लिलामीमा चढ्दछ । त्यसैले यतिखेर राज्य यस्ता किसानलाई यो व्यवसायबाट विमुख हुनबाट रोक्न तत्काल अग्रसर हुनु पर्दछ । सडकको छेउमा पुग्न लागेका किसानहरूलाई जोगाउन राज्यले सार्थक पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
यी बस्तु बजारमा पुग्न नपाई उत्पादनमा ह्रास आयो भने आयात र मूल्य दुवै बढ्ने छन् र हाम्रा किसान र उपभोक्ता दुवै ठुलो मर्कामा पर्नेछन् । यसो हुन नपाओस् । तर खाद्यान्न उत्पादनमा खासै असर नपर्ने भएकोले खाद्य सङ्कट भने हुने छैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक गतिविधि पूर्णतः क...